Taliyaha Ciidanka Onkod “7-Maleeshiyo ayaan ku kharijinay howlgalki aan sameynay” SAWIRRO – Radio Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Onkod “7-Maleeshiyo ayaan ku kharijinay howlgalki aan sameynay” SAWIRRO
Lix ka tirsan Maleshiyaadka kooxda Shabaab ayaa lagu khaarijiyey Howlgalki Ciidamada Sida gaarka ah u tababaran ee Onkod iyo kuwa booliska ay sida wada jirka ah uga fuliyeen Maleshiyaadki soo weeraray Hotel Wehliye, Sida uu Radio Muqdisho u xaqiijiye sarkaalka hogaaminaayey Howlgalkaas.
Sargaalka ayaa hadalka intaas ku sii daray in midkii todobaad uu isku qarxiyey Hotelka banaankiisa oo ay guud ahaan tirada maleeshiyaadka la dhimatay ay noqoneyso 7 maleeshiyo.
Dhanka kale Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo ku sugan Hotel wehliye oo isna la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadu ay soo gabo gabeeyeen howgallo ay ka fuliyeen Hotel Wehliye, halkaasi oo ay kolkii hore ay difaac xoogan muujiyeen ciidamadii Ilaalada ka ahayd Hotelka.
Afhayeenka ayaa xusay in ciidamada amniga ay iminka gacanta ku hayaan Hotel Wehliye, halkaasi oo ay dil u geysteen dhamaan kooxihii weerarka soo qaaday.
Sidoo kale ciidamada ayaa iminka howgallo ka wada Hotel Siyaad halkaasi oo ka mid ah goobaha ay argagixisadu weerarka ku soo qaaday.
Maleeshiyadkaan ayaa weerarka ku soo qaday shacab si nabad ah ku soomay maanta xiligasna afur u fadhiya, Culimada ayaa sheegay in qof muslim ah oo sooman bishi Ramadaan in la soo weeraro oo la dhibaateeyo ay tahay Allah iyo Rasuulkiisa wax looga fogaanaayo, laguna muteysanaayo ciqaab aad u adag, balse maleeshiyada khawaarijta ayaa qaatay fahan khaldan oo ka soo horjeeda shareecada Islaamka.
Maleeshiyad ka tirsan kooxda Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday goobo ay ku afurayeen Dad Shacab ah,
Dhageyso Warka Habeen ee Radio Mquqdisho